Iindaba-Kutheni le nto abantu abaninzi bekhetha umnyango wendalo？
Kutheni le nto abantu abaninzi bekhetha umnyango wendalo？
Umnyango ayisiyondawo nje yokuhombisa indawo, kodwa ikwangumgcini wendawo nganye ezimeleyo. Intle, ithule, ikhuselekile kwaye neminye imisebenzi ibalulekile, kodwa "yomelele" kulula ukungahoywa ngabasebenzisi bokuqala.
Kuba iimveliso ezingapheliyo azizukuveza ngokukhawuleza iingxaki ezininzi emva kofakelo lokuqala. Mhlawumbi emva kweminyaka emithathu okanye emihlanu, ukusilela, ukuqhekeka kunye nezinye iingxaki zivela ngokulandelelana. Ngeli xesha, abasebenzisi abaninzi baqala ukuzisola ngokwengqondo yabo yoluntu, kwaye kumhombiso wesibini, ukuzinza kweemveliso kuya kuba yinto ephambili.
Ngokubanzi, ixesha lobomi lohombiso lwasekhaya limalunga neminyaka eli-10, kwaye ubomi benkonzo iyonke yeminyango yendalo ingaphezulu kweminyaka engama-20, kwaye ubomi benkonzo yokugubungela ucango lwendalo lolona luphezulu okanye ngaphezulu kweminyaka engama-50. Ke, ngaphambi kokuhonjiswa okulandelayo, akusayi kubakho meko ithi "akukho tshintsho, kunzima ukufaka".
Kutheni umnyango wendalo uqinile nje? Ukuthatha umnyango wokugqibela we-Mujiang njengomzekelo, i-keel yamkela isizukulwana sesihlanu se-titanium magnesium aluminium alloy, enobunzima be-1.5mm. Kwaye izinto zentsimbi zealuminium ezinamandla amakhulu, zezona mveliso zintle zeminyango yangaphakathi yale ndlu, engenawo manzi, ubungqina bomswakama, ukuqhekeka ngokuchasene nokubola, ukunganyangi, ukungqubana, ukungqubana kunye nokuphila ixesha elide.
Ngapha koko, uMuangang ophezulu wokugqibela wendalo ucango ulungele ukusetyenziswa ngokupheleleyo kwekhaya. Umzekelo, umnyango wekhitshi kwindawo enomswakama ngakumbi ihlala iyindawo engavumelekanga yeemveliso zeminyango yeplanga. Nangona kunjalo, iimpawu zomnyango wendalo zokungena manzi kunye nobungqina bokufuma-zinokusombulula le ngxaki kwaye zilungele imeko-bume yokufuma okuphezulu okufana nekhitshi kunye negumbi lokuphumla.
Ukongeza kwezi zibonelelo zibini zokuqina kunye nokusetyenziswa ngokubanzi, ucango lweManjiang lunezinye izibonelelo:
Isiphelo somnyango ophakamileyo wezinto eziphilayo kwi-Mujiang emnyango wokhuni kubandakanya iinkuni, ilaphu, ilitye, umbala oqinileyo kunye nezinye iziphumo. Uyilo luyinoveli kwaye ilula, inemfashini kwaye inesisa, enokuthi ihlangabezane ngcono neemfuno zesizukulwana esitsha sabathengi be-90s kwimbonakalo yemveliso.
Ngokhuselo lokusingqongileyo, ezona zinto ziphambili zomnyango we-Mujiang ngomthi zii-titanium magnesium aluminium alloy, antibacterial and fire-resistant composite multilayer board, anti Beite antibacterial board, ipeyinti yendalo, ipleyiti yasimahla yokunxiba, engenayo i-formaldehyde kunye nesinyithi esinzima, kunye nokufikelela umgangatho wokhuselo lokusingqongileyo lwe-E1.
Ukuba ufuna nje ukwazi udidi lweemveliso, nceda uze eMajiang isiphelo sendlela yokuthelekisa. Ndiyakholelwa ukuba uza kukhetha uMuangang ongowona uphakamileyo umnyango ophakamileyo onefashoni, eqinileyo kunye nokhuselo lokusingqongileyo njengeentsapho ezininzi!
Isakhono sokugcina umnyango weplanga kunye ne-atte ...
Kutheni le nto abantu abaninzi bekhetha i-ecologica ...
Iinkonzo zabaThengi: 18931163337